Kubatsira kwekutsanya kwave kuchizivikanwa kwenguva refu. Socrates zvakare akataura kuti kuwedzera kwakanakisisa kune zvokudya ndiko nzara.
Dambudziko remazuva ano nderokuti munhu anodya zvakawanda kupfuura zvaanoda. Inoratidzirwa kuti kuitira kugutsa nzara, zvakakwana kudya 200 g.Asi zvinosuruvarisa, mutemo uyu unoshandiswa nevakashoma uye, chaizvoizvo, kudya kunowanzoguma kunorema mukati mudumbu.
Kubatsirwa Kwokutsanya Kwemazuva Rimwe
Kana iwe uchida kusunungura uye kuchenesa muviri, zvino iyo nzira ndiyo nzira yakakodzera. Izvi zvinosanganisira zuva rokutsanya kupfuura nzara yakakwana. Pasinei nenguva shoma yakadaro, kubatsirwa kwezuva rimwe kwekutsanya kwehutano kwakawanda. Kana muviri usingagamuchiri zvokudya kwemaawa makumi maviri nemana, unosara uye unotanga kuchenesa.
inowedzera mutengo wemagetsi;
mafungiro ekuchinja kwezvokudya;
unogona kubvisa zvokudya zvinodhaka.
Nutritionists vanokurudzira kutanga kutanga nenzara musi weMugovera mangwanani, uye kupedzisa neSvondo mangwanani.
Zvakakosha kugadzirira nzara:
Mazuva matatu pamberi pezvinorayirwa nenzara, tisabvisa nyama, hove uye zvinwiwa zvinodhaka.
Kwemazuva maviri, siya mapeti uye nyemba.
Kwezuva, idya mimwe miriwo, michero uye michina yemukaka-muto.
Kubatsirwa nenzara pamusoro pemvura ndiko kushambidza muviri wezvinhu zvinokuvadza. Zuva nezuva zvakakosha kunwa kusvika 2 litita emvura yakachena. Kana iwe uine nzara yekutanga, zvino zvakanaka kuti ugare pamba nguva dzose, nokuti unogona kunzwa uine utera, chizivi, musoro uye kunyange kushungurudzika.
Zvakanakira Kudya Kuchengeta
Munguva yekutsanya, muviri unoshandisa mafuta kubudisa glucose, izvo zvinowedzera kubudiswa kwemadhomoni adrenal, ane anti-inflammatory effects.
Chii chinobatsira mazambiringa matsva?
Nzira ipi yekurasikirwa uremu ne buckwheat?
Cane shuga yakanaka
Ikoko yakabikwa - yakanaka uye yakaipa
Chii chinobatsira mackerel?
Kokoti kuveurwa - caloric content
Chicken soup nevermicelli - caloric zvakagadzirwa
Mbatata yakasviba - koriori yehuwandu
Sei chibage chiri chakanaka?
Zvinoshungurudza chokoti zvakanaka uye zvakaipa
Sausage cheese - calori content
White chai yakanaka uye yakaipa
Tarhun yakanaka uye yakaipa
Nemhaka yei eggplants inobatsira?
Mutemo wekudiwa mune zvehupfumi - chii?
Kukata Xenia Borodina
Nei chihuro chinotota?
Irina Sheik naBradley Cooper pavaifamba nemwanasikana akazvarwa
Kikona yekona yakagadzirirwa - zvirongwa zvokugadzira
Nzira yekuita sei TV kubva kunze
Red-tailed Jaco - mazano pamusoro pehuwandu
Mukati mekamuri yemusikana
Zvaiita sekuti: mapfumbamwe makumi matatu makumi matatu nemaviri aya anoratidza kuti "takaparadzwa sei" isu tiri!
Charisma Bruce Willis haazoperi uye muna 62
Icho kutonhora kwemwana kunosvika pagore
Autumn crafts ye kindergarten yako
Rash mumaoko mumaoko echimiro che vesicles - kurapwa
Chii chinonzi buckwheat phariji inobatsira?
Kuchengetedza kurwisa hepatitis B kune vanhu vakuru
Down jackets Console - yechando 2017
Swimsuits Rebecca 2013
Chokwadi chinofadza pamusoro peLondon
Jewelery kubva kugoridhe